မိမိကိုယ် မိမိ စမ်းစစ်ဝေဖန် ဘို.( ၂ )
တချို.ကလဲ We make war that we may live in peace.လို.သူတိုလုပ်တာ
သူတို.တရားတယ် ဖြစ်အောင် ပြောကြတာဘဲ ။ ပြောတာတွေကတော ပြောကြမှာဘဲ ။ သူတို.လဲပြော ကိုယ်လဲ ပြောဘဲ ပါးစပ်ပေါက်တွေ ဘူးစို.နဲ့ စို.ထားလိုရတာမှ မဟုတ်တာ ၊ ကောင်းတာ ဆိုးတာ ပါးစပ်ထဲတွေရာ လျှာတွေ.ရာပြောကြတာဘဲ ။ ကိုယ့်အတွေအကြုံနဲ့ ကိုယ် ပြောကြတာဘဲ။ ဘက်မျှတာ မမျှတာ ချန်ခွင်နဲ့ချိန်လို.ရရင် ကောင်းသားဘဲ ။ ခင်ဗျား စကားပြောတာကို ကျန်သူတွေအားလုံးက ငြိမ်ပြီး နားထောင်နေကြရမှာလား ။ သူတိုအမြင် သူတိုရှုဒေါင့်တွေကိုပြော လာတာကိုဘဲ ကျေးဇူးတင်၊
တပ်မတော် အကြောင်းပြောလာရင် တာဝန်ရှိပုဂိုလ်တွေက စမ်းစစ် လေ့လာ ၊ မှန်ရင် အရေးယူ နောင်မဖြစ်အောင် ပြုပြင်ရမှာဘဲ ပေါ့ ။ တပ်မတော်ကို အမြဲတန်း ကာကွယ်နေလို.တော့မညဖစ်ဘူး၊ အဆိပ်ပင် ရေလောင်းတာ ဖြစ်နေတယ် တချိန်ကျရင် ကိုယ်နားကိုပါ ကိုက်လာကြမယ်။
ခင်ဗျားမှာ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ရှိတယ် ၊ အကြံကောင်းတွေ ရှိတယ် နည်း
ကောင်းလမ်းကောင်းတွေ ရှိတယ် .Constructive Ideas , Constructive approach သက်ဆိုင်ရာကို တင်ပြ။ လိုအပ်ရင် ခင်ဗျားကို ခေါ်ယူတွေဆုံ ဆွေးနွေးလိမ်မယ် လိုအပ်ရင် ကြီးကြပ်ရေးမှုး ၊ ညွှန်ကြားမှူး တာဝန်
တောင်ပေးခြင် ပေးအုံးမယ် ၊ ခင်ဗျားသိတယ် မဟုတ်လား အခုဆိုရင် နိုင်ငံခြားသား စစ်စစ်တွေ ကျုပ်တိုဆီမှာ လာပြီး ဆရာလုပ်နေတာ၊ အတိုင်ပင် ခံလုပ်နေကြတာ. ခင်ဗျား ဆန္ဒရှိ ကျွမ်းကျင်တဲ့ လုပ်ငန်း တခုပြင်ဆင်ဘို. ဖန်တည်းဘို. စာတမ်းတခု တင်လိုက်စမ်းပါ ။
ခင်ဗျားတော့ မပြောတတ်ဘူး ကျုပ်အမြင်မှာတော့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာ
ကျုပ်တိုအားလုံး အော်ကြ ဟစ်ကြ ဆိုကြ ဆဲကြ လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ ပြသနာအချို.ကို အခုအစိုးရဟာ ပြုပြင်ဆောင်ရွက်လာသလို. အမေရိကန် အင်္ဂလိပ် အပါအ၀င် အနောက်အုတ်စုကရော မစ္စစ် အဲရစ် တို.ပါ ပြုပြင်လာကြတာတွေ မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ.နေရတယ် . ASIAOBSERVER မှာ ခင်ဗျားတို ကျုပ်တို. ဆွေးနွေးခဲ့ကြဘူးတာတွေဟာ အကောင်အထည် ပေါ်လာနေတာတွေကို ခင်ဗျားသတိထားမိဘို.ကောင်းတယ် ၊ ကျုပ်တိုပြောတိုင်းတော. မဖြစ်ဘူးလေ သူများပြောတာတွေကလဲ ရှိသေးတယ် မဟုတ်လား။
အစိုးရအမှုထမ်း အရာထမ်းနဲး. ပြည်သူဝန်ထမ်း ကွာခြားပုံကိုပြောဘူးပါတယ် ။ လူပေါ်မှာ မူတည် ပါတယ် ။ သူတိုဟာ ကိုယ်ကို အရှင်သခင် မမှတ်သလို သူတိုကိုလဲ သူတို. အရှင် သခင်လို. မှတ်စရာမလိုပါဘူး။ သူတိုဟာ ငါတို.ခိုင်းဖတ် ငါတို.ကို Serve လုပ်ရမဲ့ Servants တွေလို.လဲ ကိုယ်က မှတ်စရာ မလိုပါဘူး၊ ဒို.ရဲ့ ခိုင်းဖတ် မဟုတ်ဘူး သူတိုရဲ့တာဝန်တွေကို လေးစားရမယ် မထေမျက်မြင်ပြုစရာမလိုပါဘူး။
နာမည်ကျော် စာရေးဆရာကြီး Dale Breckenridge Carnegie ရဲ့ How to Win Friends and Influence People စာအုပ်မှာ ပြုံးပါ လို. အကြံပြု ထား
ပါတယ်၊ ကိုယ်က ပြုံးရင် သူကလဲ ပြုံးလာပါ လိမ့်မယ်။ ပြောရမယ် ဆိုရင် တနိ်ု်င်ငံသား ခံယူထားပြီး အမိနိုင်ငံကို ခေတ္တ ခဏ အလည်အပါတ် လာသူ
တွေဟာ သူတိုကို သူတို ဘာကောင်တွေ မှန်းတောင်မသိဘဲ ကျုပ်တို.လူတွေ
အပေါ် ရိုင်းဆိုင်းတာတွေ မခြေ မငံ တွေ ။ ငါဘာဘဲ ငါညာဘဲ ဘယ်သူ.သောက်ရေးစိုက်ရမှာလဲ ဆိုတဲ့ ဟန်ပန် အမူအရာနဲ့ ။ အထူးသဖြင် Myanmarican ဆိုတဲ့ တချို.အကောင်တွေ ပေါ.ဗျာ ။ သူတို.ပထွေးတွေ ၊ သူတိုအမေ့လင်တွေ လင်ငယ်တွေရဲ့ လေသံအတိုင်းဘဲ။ သူတိုကို ဘယ်သူမှ မထိနဲ ဆိုတဲ့ ငနဲ တွေ ပေါ့ ။
အခုဆိုရင် နဲနဲများပိုဆိုးလာ သလား မသိဘူး. ဦးသိန်းစိန်က အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းခွင်ပေးလိုက်လို. သူတိုကို ဘယ်သူဘယ်ဝါ လို. မေးမြန်း စစ်ဆေးတာတောင် မကြိုက်တဲ့ ပြည်ပြေးခိုလှုံ တွေလဲ ရှိသေးတယ်။ စစ်ဆေးမေးမြန်ရမှာ စစ်ဆေးသူရဲ့ တာဝန်ဘဲ. ကိုယ်က ဘာဖုံးထားစရာရှိလို. မကြိုက်ရမှာဘဲ. ။ ပြောရမယ် ဆိုရင် နိုင်ငံသား မြန်မာတိုင်းရင်းသာ သူပုန်
တွေ ဆိုတာရှိတယ် . ဗုံးတွေ ခွဲနေတာ မျက်နှာဖြူတွေ မဟုတ်ဘူ။ John Yattaw တောင် မလုပ်ဘူး ။ ကောင်းတာဟာ ကောင်းတယ် မကောင်းတာ
ဟာ မကောင်းဘူး။ အကောင်းအဆိုးဆိုတာ အားလုံးမှာဒွန်တွဲနေတယ်။
ဒါပေမဲ့ အတိုက်အခံ လုပ် ဆန်ူကျင်ဘက် ၀ါဒ ဖြန်. နေသူတွေ ဆီက ခင်ဗျား ဘာမျှော်လင့်နေသလဲ ၊ ခင်ဗျားဖါသာ ခင်ဗျား မျှော်လင့်နေတာ သူတိုနဲ့ ဘာမှ
မဆိုင်ဘူး။ ခင်ဗျားဟာ သူတိုရဲ့ အရှင်သခင်မဟုတ်ဘူး။
ဦးသိန်းစိန်ဟာ သူခိုးတွေ ဓါးပြတွေ သူပုန်တွေ ငသောင်းကျန်းတွေကို ကျန်သာမန် ဥပဒေတွင်းနေထိူုင်သူများနဲ တန်းတူ တစားထဲ ထားလိုက်တာ နိုင်ငံခြားသို.အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ. ရောက်နေကြသူများ ဆိုတဲ့ စကားလုံး
အောက်မှာ ထားလိုက်တာ။ နိုင်ငံခြားမှာ ရောက်နေတဲ့ လူတွေ အားလုံးဟာ သူခိုးတွေ ဓါးပြတွေ သူပုန်တွေ ငသောင်းကျန်းတွေ ခိုလှုံ ပြည်ပြေးတွေနဲ့ တတန်းတစားထဲ ဖြစ်သွားရတယ် ။ နိုင်ငံခြားကို တရားဝင်ရောက်ရှိ ရိုးရိုး
သားသား ကောင်း ရောင်းကောင်းဝယ်လုပ်နေကြသူတွေကို အကြီးအကျယ် စော်ကားလိုက်တာဘဲ၊ နိုင်ငံခြားမှာ ရိုးရိုးသားသား လုပ်စားသူတွေဟာ ဒီပြည်ပြေး ခိုလှုံသူတွေကြောင့် ဘဲ အလကားနေရင်း တန်ဘိုးကျ သိက္ခာကျ
ရတယ် ။ ရင်ကြား စေ့ရေး ညီညွတ်ရေးဆိုတာကို ဘယ်လို.မှအထောက်အကူ
မပြုဘူး။ ပြည်တွင်းမှာလဲ ဒီလိုဘဲ. ရာဇ၀တ်မှုတွေ တိုးဖြစ်လာတာဘဲ ရှိတယ်။ တိုးတက်မှုတရပ်ပေါ့လို. မျက်စေ.မှိတ်ပြောတော့မလား ။
သူများပြောတာတွေ ဘာမှ ဂရုမစိုက် စရာမလိုဘူးလို.တော မပြောလိုဘူး၊ သိပ်ဂရုစိုက်ရင် ကိုယ်သာ ပြော.ညံ့ရာ ကျသွားလိမ်.မယ်။ သူများက ကိုယ့်ကို လွှမ်းမိုးးသွားလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ရဲ့ ပြော.ညံ့မှူကြောင့် လူနဲစုအကျိုးက အများစု
အကျိုးကို ထိပါးလာရင် ကိုယ်ကျိုးနဲတတ် ပါတယ်လို. ဘဲ ပြောခြင်တယ် ။ သူလုပ်တာတွေဟာ အားလုံးကို အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်ပါတယ် ၊ တပ်မတော် ကိုယ်တိုင် အနေရ အထိုင်ရကြပ်စေပါတယ်။ စိတ်ဓါတ်ကျစေပါတယ် ။ သူလုပ်ရဟာ ကျုပ်လိုလူရဲ့ အမြင်မှာ- မျက်နှာမရ ခြေထောက်ရ ဆေးအတွက်
နဲ့ လေး ဆိုတာမျိုးဘဲ လို. မြင်တယ်။ ။
တော်လောက်ပြီလေ. Good luck to you.